IiArcGuments ezingezizo ezomhlaba-iGeofumadas
Ngo-Okthobha, 2009 ArcGIS-ESRI, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Kodwa okokuqala ukuba ndikubonile ndabona ukuba icebo Izitayela zakho zazingekho kumgangatho wam, mhlawumbi kuba loo ngqangi yokuqala yangibonisa yatshintshwe kakuhle kwizinto zakho zokuthanda; Ndade ndacinga ukuba kunjalo geopdf ukususela ngaloo mihla. Emva koko ndadideka kunye neziseko rgb yakho iilebhile, ke kutheni ndibe nesibindi sokuphanda umboniso weemephu uze ufumanise ukuba awubonakali nzima.
Kunzima ukuqonda ngelixa ukhetha ukusika imivuno yakho nge-archaic Ukuza, wenza sengathi uhambela Avenue kunye nesiqingatha sexesha owachitha kuyo ifomathi ifayile endiyithandayo yonke impelasonto ... kungakhathaliseki ukuba yeyiphi na ukwandiswa ukuba sasihlala sinayo ifayile kunye negama elifanayo elihlaselayo kunye neencwadi ezintathu emva kwexesha ... size sifike kwi-fragility ye prg.
Hayi, kukuba izinto azihlali zilukhuni, kodwa ndiyinyaniso, ezinye zeendlela zakho ngqondweni ngoku aphelelwe naluphi na umntu ofayo, ngaphambi kokuba sizixazulule ngezinye iindlela ... kodwa kungekhona ... kuphela geodatabase kwaye loo nto ichanekile ukuba yonke into Shishini uyandityumza. Ewe ndiyayithanda entsha yakho iiklasi, yakho kwimimandla, ukhangeleka kakhulu xa ubona ndicula ngoloo mncumo oqhayisa i-nostalgia ... leyo yeveki yokuqala, xa sikhupha ifayile eyongezelelweyo mrsid. Emva koko ecw ngokugqithiseleyo wabiba imbono kodwa ndikhumbula ukuba ukulula kwamanqanaba akho aphezulu mdtnge ukunikezela ngokungagqibekanga kodwa ngaphandle kokunciphisa ekugqithiseni.
Hayi, ndihlala ndikhumbula ukukubona, kwenzekani ukuba ngoku ubeka intlawulo kuyo yonke into WMS kuba nzima, awuyi kulindela ngaphantsi iinkonzo nangaphezulu 1.03. Hayi, imigangatho OGC Andikhathalele, nokuba ngaba kufuneka ndihambe ArcIms, qhekeza ikakhukhunathi yam ArcObjects kunye nomnatha ArcSDE; xa nje uqinisekisa ukuba uya kukwenza ngokuthe ngqo kwi siseko I-Oracle 10g.
Kum? Ndiyathanda C # .NET y lukwazi, UPyton ukuze bangandilibali, JDK ke esinye isiqingatha asazi. Akukho nto inzima kwidesktop, yonke into isuka kwi- mncedisi yokuphunyezwa ngenhlonipho uphawu kwaye ndiyanelisekile, nangona sisebenza kunye nokhuphiswano, inzuzo, kodwa apha phakathi kwethu, kwi-Acer yam enayo Qgis ephathekayo ukuba ukhumbule ukuba ngelinye ilanga ihlabathi linalo 16 ungazama.
Hayi, andilindelanga ukuba ayinakuba yintoni. Kulungile.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ixabiso le software
Post Next Abaphumeleleyo be-Inspired 2009Okulandelayo »